Ny mpino dia miandrandra famonjena am-pahatokiana – FJKM Ambavahadimitafo Ny mpino dia miandrandra famonjena am-pahatokiana |
Ny mpino dia miandrandra famonjena am-pahatokiana
Alahady 29 novambra 2020, alahady voalohany amin’ny Advento, hamaranana ny lohahevitra hoe « Miandrandra famonjena ny mino ».
Ny mpitandrina Randrianarisoa Alain no nitondra ny hafatr’Andriamanitra avy ao amin’ny Salamo 121 : « 1MANOPY ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho; Avy aiza ny famonjena ahy? 2Ny famonjena ahy dia avy amin’i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany. 3Tsy mba havelany hangozohozo anie ny tongotrao; Tsy ho rendrehana anie ny Mpiaro anao. 4Indro, tsy matory na rendrehana Ny Mpiaro ny Isiraely. 5Jehovah no Mpiaro anao;Jehovah no fialofanao eo amin’ny ankavananao. 6Ny masoandro tsy mba hamely anao nony andro,Na ny volana nony alina. 7Jehovah hiaro anao amin’ny ratsy rehetra; Eny, hiaro ny fanahinao Izy. 8Jehovah hiaro anao, na mivoaka na miditra,Hatramin’izao ka ho mandrakizay. «